Madaxweyne Karazaay oo qiray in xukuumadiisa ay ku guul dareysatay in ay nabad ku soo dabaasho dalka Afghanistan – SBC
Madaxweyne Karazaay oo qiray in xukuumadiisa ay ku guul dareysatay in ay nabad ku soo dabaasho dalka Afghanistan
Kabul:-Madaxweynaha daka Afghanistan Xamiid Karasaay ayaa qiray in xukuumadiisa iyo isbahaysiga NATO ay ku guul dareysteen sidii ay amaa ugu soo dabaali lahaayeen dalkiisa inkastoo ay ka soo wareegatay 10 sano dhicitaankii xukunkii Daalibaan.
Madaxweyne Karasaay ayaa ku eedeeyey dalkaPakistanin uu taagero dhaqhaqaaqyada ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalka afghanitsan isagoo carabaabay in ay jiraan saldhigyo aamin ah ay dhaqdhaqaaqyadaas ay ku leeyihiin xuduudaha labada dal.
Hadalka karasaay ayaa ku soo beegmaya kadib warbixin taa lamid ah oo uu jeediyey amaanduulihii hore ee ciidamada NATO ee dalka Afghanistan Jeneraal Stanly Maker crystal kaasi oo sheegay in toban sano kadib ujeedooyinkii laga lahaa dalkaAfghanistanay aad u fogtahay in lagu guuleysto.
Jeneraalka ayaa ku nuuxnuuxsaday in xukuumadda mareykanka ay u baahan tahay in ay aqoon u yeelato dalkaAfghanistansi ay ugu guuleysato ujeedooyinkeeda.
Karasaay ayaa tilmaamay in loo baahnaa in mareykanka iyo NATO in ay diirada saaraan waqti hore goobaha ay ku dhuumaaleesanayaan dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda xukuumadiisa iyo joogitaanka ciidamada shisheeye dalkaAfghanistan.